Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Menstruation Question ရာသီမေးခွန်း
Menstruation Question ရာသီမေးခွန်း
ဆရာရှင့် ကျွန်မအခု 28 လုံးပါ တားဆေးကို သောက်နေပါတယ်ရှင့် ရာသီမမှန်လို့ပါ ကျွန်မသိချင်တာလေးရှိလို့ပါဆရာ အဲဒီဆေးက ၂၁လုံးကဟော်မုန်းဆေး ၇လုံးကအားဆေးဆိုတော့ ကျွန်မသောက်နေတုန်း ရာသီလာရင် မသောက်ပဲ ရပ်ထားရမှာပါလား ဆရာ ၃ - ၄လစွဲသောက်ရမယ်ဆိုတာက ရာသီလာရက်တွေလည်း သောက်ရမှာပါလား နားမလည်လို့ပါ ဆရာရှင့်
Pills Q and A https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/pills-q-and-1.html စာ ဘလော့မှာဖတ်နိုင်။
ဆရာရှင့် ဘလော့မှာ အိမ်ထောင်သည်တွေမေးထားတာတွေပဲ တွေ့ရပါတယ် ကျွန်မက ရာသီမလာတာ ၃လလောက် ရှိနေပါတယ် Marvelon သောက်နေပါတယ်ရှင့်ဆရာ့ blog ထဲမှာဖတ်ကြည့်တာ နားမလည်ဖြစ်နေလို့ပါ ဆရာ ကျွန်မက ရာသီလာရင် ရပ်ထားရမှာလား သိချင်တာပါရှင့် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာရှင့်
လင့်တွေတချို့ကဟောင်းလို့ ပို့မရတာနဲ့ အသစ်တွေနဲ့ အစားထိုးလိုက်ပြီ။
1. Amenorrhea (2) ရာသီမလာရင် (၂) https://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/amenorrhea.html
2. Amenorrhea ရာသီမလာရင် http://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/amenorrhea.html
3. Antidepressant and premenstrual syndrome http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/antidepressant-and-premenstrual-syndrome.html
4. Birth Control pills 25 FAQs ကိုယ်ဝန်တားစားဆေး အမေး-အဖြေ ၂၅ ခု https://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/birth-control-pills-25-faqs.html
5. Contraceptive pills ကိုယ်ဝန်တားဆေး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/05/contraceptive-pills.html
6. DUB အခါမဟုတ် ရာသီဆင်းခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/dub.html
8. Menstrual mood swings ရာသီလာခြင်းနှင့် စိတ်ပြောင်းလဲမှု https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/menstrual-mood-swings.html 0
9. Menstrual Suppression ရာသီမလာအောင်နှိမ်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/menstrual-suppression.html
10. Menstruation (1) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/04/menstruation.html
11. Menstruation (3) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၃) https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/menstruation-3.html
12. Menstruation (4) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၄) https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/menstruation-4.html
13. Menstruation (5) မိန်းမပီသတာ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ (၅) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/menstruation-5.html
14. Menstruation after having baby ကလေးမွေးဖွါးပြီးနောက် ဘယ်တော့မှာရာသီပြန်ပေါ်မလည်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/menstruation-after-having-baby.html
15. Menstruation and athlete http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/menstruation-and-athlete.html
16. Menstruation and athlete ကျိန်စာသင့်ခံရတာလား၊ အယူအဆလွဲမှားတာလား http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/menstruation-and-athlete.html
17. Menstruation Questions ရာသီအကြောင်း
18. Museum of Menstruation ရာသီပြတိုက် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/museum-of-menstruation.html
19. Myths about menstrual cycle ရာသီလာခြင်း အရိုးစွဲအယူအဆများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/myths-about-menstrual-cycle.html
20. Premenstrual syndrome (PMS) ရာသီမလာခင် ဖြစ်ချင်တာတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/premenstrual-syndrome-pms.html